Item No .: MS-1079D
Laydhka halo ee DOT ayaa keenay 2010 Jeep Wrangler JK/JKU oo leh halo drl cad iyo calaamadaha leexashada amber, oo ku habboon 2007 ~ 2017 jeep wrangler jk/jku.
Wareegayaga 7 -da ayaa horseeday halo nalalka hore ee 2010 Jeep Wrangler waxay si weyn u wanaajin kartaa masaafada saadaasha iftiinka iyo muuqaalka guud, waxay la yimaadaan 4 qaabab beam oo ay ku jiraan dogob sare, dogob hoose iyo drl cad iyo calaamadaha leexashada amber. Guryaha aluminiumka ah ee ka samaysan diil-kabka ayaa leh astaamaha qaboojinta hufan, xoog weyn iyo culeys khafiif ah, miridhku iyo ka-hortagga, guryaha shaabadaysan iyo biyaha IP67. Our Jeep beddelka nalka hore ee jk waa DOT SAE oo la ansixiyey kaas oo sharci ku ah waddada. Nalalkaan hore ee 2010 jeep wrangler way fududahay in la rakibo, oo ku habboon 2007-2017 Jeep Wrangler JK 2-albaab JKU 4-albaab.
Faahfaahinta nalalka hore ee 2010 Jeep Wrangler
Number Model MS-1079D
Beam Sare 40W 3400LM
Laydhka Hoose 20W 2000LM
Tilmaamaha laydhka hore ee 2010 Jeep Wrangler
Habab badan oo iftiin leh: Hi/Lo Beam+ 2 midab DRL+ Halo Ring, White High iyo Low Beam, iftiin jilicsan (u dhow iftiinka maalintii) oo si hufan u yareeya daalka wadista. Amber DRL oo ah signalaha leexashada, cad DRL oo ah iftiin digniin. Naqshadeynta wax-ka-qabashada kakan waxay hagaajin kartaa muuqaalka guud marka iftiinka mashruuca inta lagu jiro masaafada dheer.
Qaabka Horizon Gaarka ah: Muujiyaha isku-dhafan ee isku-dhafan & DRL-ku dhex jira ayaa ku siinaya qaab iftiin aad u dhalaalaya oo kuu oggolaanaya inaad si aad u fog u aragto waddada. Iftiinkani wuxuu ka samaysan yahay qalab adag oo waara. La imow daahfurnaan iftiin sare leh oo ka badan noocyo badan oo galaas ah.
Nidaamka Faafidda Kulaylka ee Wanaagsan: Guryaha daawaha leh ee aluminium-ka-shubka ah ayaa si hufan u kala firdhin kara kulayl badan oo qabow, ka dhiga laambadda cimriga in ka badan 50,000hrs; Qiimaynta IP-ga 67 ee biyaha ayaa hubinaysa ku-tiirsanaanta cimilada oo dhan.
Si sahlan loo rakibo: Bareeso oo ciyaar. Ma jiro suun dheeraad ah oo silig loo baahan yahay, kaliya si toos ah ugu xir adapka kaydka. Kaliya waxay kugu qaadataa 30 daqiiqo inaad ku dhammayso rakibidda.
Faa'iidooyinka our Wrangler Nalalka